Archive du 20190905
Marc Ravalomanana Miantso fifamelana sy fiombonana
Endrika iray ao anatin’ny firenena Malagasy ny kaominina Antananarivo Renivohitra izay mampiseho fa mendrika sy sahaza azy ny fandraisana an’ny Papa, ka tsy ho mena-mitahy amin’ny firenen-kafa isika, hoy ny mpanolotsaina manokan’ny ben’ny tanànan’Antananarivo Atoa Marc Ravalomanana.
Andriantsizehena Benja Urbain Lasa filoha vonjimaikan’ny RPSD Vaovao
Voatendry filoha vonjimaika hitarika ny antoko RPSD Vaovao, Atoa Benja Urbain Andriantsizehena fa aorian’ny kongresy izay ataon’ny antoko no hametraka ny birao maharitra izy ireo.
Ravalo ho kandida ben’ny tanàna Mbola miandry ny fanapahan-kevitra…
Ho avy ny fanapahan-kevitra, rehefa tonga ny fotoana mahamety azy. Tsy maintsy angatahina amin’Andriamanitra izany fa ny zava-dehibe amiko aloha izao dia ny fandraisana ny Papa, hoy i Marc Ravalomanana raha nanontanian’ny mpanao gazety momba ny mety ho firotsahany ho ben’ny tanànan’Antananarivo omaly.
Fidarohana beantitra tany Behenjy Ny zanany sy ny taizany no nahavon-doza
Nampidirina am-ponja vonjimaika ireo roalahy nikasa hamono ireo mpivady efa antitra tao Behenjy, any amin’iny lalam-pirenena fahafito iny, raha araka ny fampitam-baovaon’ny zandarimariam-pirenena.
Ady amin’ny mikraoba Entanina hanasa tanana koa ireo mpitsabo mandray marary
Entanina hanasa tanana avokoa ireo mpitsabo eny anivon’ny tobim-pahasalamana amin’izao, aorian’ny fandraisany an-tanana marary iray na fandraisana fitaovana iray avy nampiasaina.
Mpanao hitsin-dalana amin’ny seranam-piaramanidina Olona fito no tsy maintsy nampidirina am-ponja
Voarara ny manao hitsin-dalana eo amin’ny faritra hipetrahana sy hiaingan’ny fiaramanidina ao Sambava.